Egwuregwu aquarium na-acha ọla edo
Ụdị azirulu aquarium sitere na mmiri na-egbukepụ egbukepụ mmiri nke si na Karas. N'ime ndị niile bi na aquarium, azịza ọlaedo, akụkọ kachasị ogologo oge, a mara ya na China na 1500.
Aha aquarium na-acha ọla edo (Carassius auratus), dị ka ọlaedo ma ọ bụ Chinese crucian. Ndị Aquarists na-atụle azụ a ka ọ bụrụ ihe kachasị ewu ewu ma bụrụ ọkacha mmasị, ọ bụghị nanị na ọ na-adọrọ mmasị na ya, kama ọ na-enwekwa udo. Goldfish adịghị ebugharị, ha na-eri nri na akọrọ, ma ọ dị mkpa iji hụ na ha anaghị egbu nri, ọ nwere ike inye aka na mmepe nke ọrịa.
Ụdị edo edo dị iche iche
E nwere ihe dị iche iche na azụ azụ aquarium ọlaedo, ma ha niile chọrọ ihe ha nwere n'ime aquarium sara mbara.
Tụlee ụfọdụ ụdị aquarium ọlaedo na azụ ma lekọta ha:
Voilehvost . Ndị otu n'ime ụdị a na-eru 10 cm n'ogologo, ebe ha nwere ike ịnweta ọdụ ruo 30 cm, nwee isi na-enweghị isi na anya buru ibu. Ha nwere agba dị iche, site na ọlaedo siri ike na-acha ọbara ọbara, ma ọ bụ ọbụna ojii. Ihe dị n'ime azụ ndị a chọrọ aquarium sara mbara nke nwere mmiri dị ọkụ nke dịkarịa ala 22. A gaghị edebe Valehvostov na ndị na-eri anụ n'otu tank ahụ.
Telescope . E nwere telescopes scaly na scaly. Azụ ndị a buru ibu, anya na-atụ egwu, n'ụdị bọl, n'ihi ya ha nwetara aha ha. Ogologo azụ nwere ike ịbụ 12 cm, ha nwere ogologo nnu na ọdụ, e nwere nwa, ọbara ọbara, calico, agba mmanụ. Ha choro mmiri ka o ruo ogo 25, ntinye ya na ubochi, otutu osisi na ebe obibi.
Ryukin . A na-asụ aha azụ site na Japanese dị ka "ọlaọcha". Onye nwe obere ahụ, ntù buru ibu na nnukwu isi, nwere njirimara - njiri na azụ. Azụ nwere ike ịbụ pink, na-acha ọcha, na-acha uhie uhie, na-ahụ ntụpọ na calico. Nlekọta kwesịrị ekwesị maka ha chọrọ mmiri dị n'ime akwarium nke dịkarịa ala ogo 28, azụ agaghị ebi na mmiri dị ala.
Stargazer ma ọ bụ anya elu igwe . A na-enye aha azụ n'ihi anya telescopic. Azụ a nwere agba odo-acha odo odo, ọ na-etolite 15 cm. Maka nhazi nke mmadụ abụọ, aquarium nke ọ dịkarịa ala 100 lita dị mkpa. Azụ na-achọ ka a na-akọrọ ya n'ala, ọ ka mma ịhọrọ pebbles ma ọ bụ ájá buru ibu maka ha, osisi buru ibu na mgbọrọgwụ siri ike. Ụdị nnu ọlaedo a enweghị ike ịdị n'akụkụ anụ ụlọ na-eme ihe ike.
Nke kachasị ochie nkịta
Kedu otu esi elekọta turtle?
Abyssinian ìgwè nke nwamba
Akhatin ejula - elekọta na ozuzu n'ụlọ
Uwe oyi maka nkịta
Furminator maka nkịta
Ngwunye na-edozi ya na nwamba
Ọrịa Staphylococcal na gynecology - ọgwụgwọ
Kedu ka esi belata cholesterol na ọgwụ ndi mmadu?
Uwe - okpomọkụ 2015
Salad salad bụ ngwa ngwa na tọrọ ụtọ - mfe nchịkọta nri nri na mbụ
Nri porridge na mmiri - uzommeputa
Ecco akpụkpọ ụkwụ
Blue akpa - na ihe ị ga-eyi na otu esi emepụta ogwe nke ọma na akpa nke ndo nke elu igwe?
Achịcha Ụlọ Mkpụrụ - Nri
Ntuchi nke balage
Uwe ogologo oge okpomọkụ na ala
Chineke nke Agha Ares - ihe patronized, ike na ike
Mara ya na ahịhịa
18 "ihe ndi ozo di iche iche"
Chineke nke oge
Dandelion na - echekwa - uzommeputa